आइतबार अगस्त 15, 2021 |
आइतबार अगस्त 15, 2021
विषय — विषय- आत्मा
वर्ण पाठ: स्वर्ण पाठ: भजनसंग्रह 23 : 3
“"उहाँले आफ्नै नामको लागि मेरो आत्मामा नयाँ शक्ति दिनुहुन्छ। उहाँ साँच्चै नै असल हुनुहुन्छ भन्ने देखाउनलाई उहाँले मलाई धार्मिकताको बाटोतर्फ डोराउनु हुन्छ।"”
उत्तरदायी पढाइ: 1 कोरिन्थी2: 9-14, 16
9 तर, जस्तो शास्त्रमा लेखिएको छः कुनै आँखाले पनि नदेखेको, कुनै कानले पनि नसुनेको, कसैले चिन्ता सम्म नगरेको कुरा आफूलाई प्रेम गर्नेहरूका निम्ति परमेश्वरले तयार पार्नु भएकोछ।
10 परमेश्वरले यी कुराहरू हामीलाई आत्माद्वारा देखाउनु भएकोछ।आत्माले प्रत्येक कुरो बुझ्छ। परमेश्वरको गंभीर रहस्य समेत आत्माले बुझ्छ।
11 जसरी कसैले पनि अर्को मानिसको विचारहरू बुझ्न सक्दैन, खाली त्यो आत्मा जुन मानिसभित्र रहन्छ, त्यसले मात्र विचारहरू बुझ्छ। परमेश्वरको विषयमा पनि त्यस्तै हो। परमेश्वरका विचारहरू कसैले जान्दैन। तिनीहरू परमेश्वरकै आत्माले मात्र जान्दछ।
12 अब हामीले संसारमा भएको आत्मा पाएका छैनौं तर हामीले परमेश्वरबाट आत्मा पाएका छौं। हामीले यो आत्मा परमेश्वरले हामीलाई दिनु भएको कुराहरू जान्न सकौं भनेर पाएका हौं।
13 जब हामी यी कुराहरू गर्छौं, हामी मानिसको ज्ञानले सिकाएको शब्दहरूमा भन्दैनौं। हामी आत्माले सिकाएका शब्दहरू नै प्रयोग गर्छौं। आत्मिक चीजहरू बातउनुलाई आत्मिक शब्दहरू नै बोल्छौं।
14 जो मानिस आत्मिक छैन उसले परमेश्वरको आत्माबाट आएका कुराहरू ग्रहण गर्दैन। उसले यी सब कुराहरू मूर्खातापूर्ण सम्झन्छ। उसले आत्माको कुरो बुझ्न सक्दैन, किन कि ती कुराहरूलाई आत्मिक रीतिले मात्र जाँच्न सकिन्छ।
16 परमप्रभुको मनलाई कसले जान्न सक्छ? परमप्रभुलाई कसैले अह्राउन सक्छ?
1. भजनसंग्रह 35 :9(मेरो)
9 ...म परमप्रभुमा र्हषित रहनेछु। जब उहाँले मलाई बचाउनु हुनेछ म र्हषित हुनेछु।
2. भजनसंग्रह 143 : 8, 10-12
8 परमप्रभु, आज बिहान तपाईं आफ्नो स्नेहपूर्ण करूणा मलाई देखाउनु होस्। म तपाईंलाई भरोसा गर्दछु मैले गर्नुपर्ने कुराहरू मलाई देखाउनु होस् तपाईंको हातमा मैले आफ्नो जीवन अर्पण गरें!
10 तपाईंले मलाई के गर्न चाहनुहुन्छ देखाउनु होस्। तपाईं मेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईंको शुद्ध आत्माले मलाई सही मार्ग निर्देश गरोस्।
11 हे परमप्रभु, मलाई बाँच्न दिनुहोस्, यसकारण मानिसहरूले तपाईंको नाउँको प्रशंसा गर्नेछन्। तपाईं वास्तवमा धर्मी हुनुहुन्छ भनेर दर्शाउनु होस् अनि मेरो शत्रुहरूबाट मलाई बचाउनु होस्।
12 हे परमप्रभु, तपाईंको प्रेम देखाउनुहोस, अनि मेरो शत्रुहरूलाई परास्त पार्नुहोस जसले मलाई मार्ने प्रयास गरिरहेका छन। किन? किनभने म तपाईंको दास हुँ।
3. मत्ती 11 : 1
1 आफ्ना बाह्रै चेलाहरूलाई शिक्षा दिंदै येशूले आफ्ना कुराहरू भनिसक्नु भएपछि उहाँ गालिलको शहरहरू तिर प्रचार गर्न अनि शिक्षा दिन जानुभयो।
4. मत्ती 12 : 22-28
22 त्यसपछि केही मानिसहरूले एकजना मानिसलाई येशू कहाँ ल्याए। उ अन्धो थियो अनि बोल्न पनि सक्दैनथ्यो किनकि उसलाई भूत लागेको थियो। उहाँले त्यसलाई निको पार्नुभयो अनि त्यस मानिसले बोल्न अनि देख्न थाल्यो।
23 सबै मानिसहरू चकित भए। तिनीहरूले भने, “निश्चयनै यी मानिस नै दाऊदका पुत्र हुन् जसलाई परमेश्वरले हामीकहाँ पठाउने प्रतिज्ञा गर्नु भएको थियो?”
24 जब फरिसीहरूले मानिसहरूको मुखबाट यस्तो कुरा सुने तब तिनीहरूले भने, “येशूले मानिसरूबाट भूत भगाउनका निम्ति बालजिबुल शक्तिको प्रयोग गर्दछन्। बालजिबुल भूतहरूको शासक हो।”
25 येशूले फरिसीहरूले सोचेका कुरा थाहा पाउनुभयो। अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, “आपसमा झगडा गर्ने कुनै पनि राज्य ध्वंस हुनेछ त्यसै गरी आफैमा विभाजन भएको नगर टिक्ने छैन। त्यसरीनै विभाजन भएको कुनै परिवार सफल हुँदैन।
26 यदि शैतानले शैतानलाई निकाल्दछ भने, त्यो आफ्नै विरुद्ध विभाजित हुन्छ। तब कसरी उसको राज्य टिक्न वा चल्न सक्छ?
27 तिमीहरूले भन्दैछौ कि मैले शैतानको शक्तिद्वारा भूतहरू भगाउँदैछु। यदि यो सत्य हो भने, तिम्रा मानिसहरूले भुत भगाउन कुन शक्तिको प्रयोग गर्दैछन्? यसकारण तिमीहरूका आफ्नै मानिसहरूले तिमीहरूको भूल कोट्याउनेछन्।
28 तर म परमेश्वरका आत्माको शक्तिद्वारा भुतहरू भगाउँछु। यसबाट यो थाहा हुन्छ कि परमेश्वरको राज्य अघि नै तिमीहरूमा आइसकेको छ।
5. मत्ती 16: 24-26
24 त्यसपछि येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभयो, “यदि कसैले मलाई पछ्याउन चाहान्छ भने उसले आफूलाई चाहिएको चीजहरू प्रति अस्वीकार गर्नु पर्छ। उसलाई प्रदान गरीएको क्रूस उसले स्वीकार गर्नै पर्छ अनि त्यसपछि मलाई उसले पछ्याउनु पर्छ।
25 जसले आफ्नो जीवन बचाउन चाहन्छ उसले त्यो गुमाउँछ अनि जसले मेरो निम्ति जीवन गुमाउँछ उसले यसको रक्षागर्छ।
26 यदि कुनै मानिसले सबै संसार हात पर्छ तर आफ्नै जीवन गुमाउँछ भने उसलाई के लाभ हुन्छ? आफ्नो जीवन प्राप्त गर्नलाई कुनै मानिसले के दिनसक्छ?
6. मत्ती 8 : 5-13
6 अधिकारीले भने, हे प्रभु! मेरो नोकर पक्षवातले थलिएर मेरो घरको पलङ्गमा लडिरहेको छ। उसले आफ्नो शरीर चलाउनसम्म सकेको छैन अनि उग्र व्यथाले पीडित छ।
9 म कसैको अधीनमा छु। अनि मेरो अधिनमा अरू सैनिकरू छन्। यदि मैले कुनै एकजना सिपाहीलाई भनें, जाऊ भन्दा उ जान्छ। अनि अर्को एक सिपाहीलाई मैले आउ भन्दा ऊ आँउछ। यदि मैले मेरो नोकरलाई भनें, यो गर अनि उसले त्यो गर्छ। मलाई थाहा छ तपाईंसंग पनि यस्तो शक्ति छ।
11 धेरै मानिसहरू पूर्व र पश्चिमबाट आई पुग्ने छन् अनि तिनीहरू स्वर्गको साज्यमा अब्राहाम, इसाहाक र याकूबसँग भोजन गर्नका निम्ति मेचमा बस्नेछन्।
12 तर राज्यमा मार्ग पाउनु पर्ने मानिसहरू चाहिं तिनीहरू अन्धकार भित्र फालिनेछन्। अनि त्यो ठाउँमा मानिसहरू पीडाले रूवाबासी र दाह्रा किट्ने छन्।
7. यशैया 55 : 2, 3
2 किन? तिमीहरू त्यस्तो चीजहरूमा पैसा बर्बाद गर्छौ जुन खास भोजन नै होइन? किन तिमीहरू त्यस्ता व्यर्थका कामहरू गर्छै जसले तिमीहरूलाई सन्तुष्टी दिँदैन? एकदमै ध्यान दिएर मेरा कुरा सुन अनि तिमीहरूले राम्रा भोजन खान पाउनेछौ। तिमीहरूले त्यस्तो राम्रा खाना खानेछौ जसले तिम्रो आत्मा तृप्त पार्नेछ।
3 मैले भनेका कुराहरूमा एकदमै ध्यान दिएर सुन्। मेरो कुरालाई ध्यान दिएर सुन तिमीहरूका प्राणहरू बाँच्नेछन्। मकहाँ आऊ र तिमीहरूसँग एक करार गर्नेछु जुन सदा-सर्वदा रहनेछ। यो करार त्यस्तो हुनेछ जुन मैले दाऊदसँग गरेको थिएँ।
8. एफिसी4: 17-24
17 म यो भन्छु र प्रभुको सम्बन्धमा चेतावनी दिन्छुः परमेश्वरलाई नचिन्नेहरू जस्तो भएर नबस। तिनीहरूका विचार निकम्मा हुन्छन्।
18 ती केही बुझ्न सक्तैनन्, अनि केही जान्दैनन् किन कि तिनीहरू सुन्न अस्वीकार गर्छन् त्यसैले परमेश्वरले दिएको जीवन जस्तो तिनीहरूको जीवन हुँदैन।
19 लज्जा अनुभव गर्ने क्षमता तिनीहरूले गुमाएका छन्। कुकर्म गर्न मै तिनीहरूका जीवन पूर्णरूपले लागेकाछन् । हर प्रकारको नीच काम गर्न ती सधैं तम्सन्छन्।
20 तर तिमीहरूले सिकेको ख्रीष्टको कुरा त्यस्तो होइन।
21 म जान्दछु, तिमीहरूले ख्रीष्टको बारेमा सुनेकाछौ अनि तिमीहरू उहाँमा छौ, यसर्थ तिमीहरूले सत्यता सिक्यौ। हो, खासमा सत्यता येशूमा छन्।
22 तिमीहरूलाई आफ्नो पुरानो स्वभाव छोडन सिकाइयो। त्यसको अर्थ, अघिका दिनहरूमा पछ्याइ हिंडेको कुमार्गलाई तिमीहरूले त्याग्नु पर्छ। त्यो स्वभाव त्यसैका धोखापूर्ण इच्छाहरूले त्यसलाई थोत्रो बनाइसकेका छ।
23 तिमीहरू आफ्ना मन र आत्मामा नयाँ बनाइनु पर्छ।
24 तिमीहरू नयाँ मानिस बनिनु पर्छ जस्तो विश्वास अनुसार धर्मी र पवित्र जीवन बाँच्न परमेश्वरले तिमीहरूलाई आफ्नै अनुरूपमा सिर्जनु भएको छ।
9. रोमी 8 : 1, 2, 14-17 (लाई 2nd ;)
14 परमेश्वरका साँचो छोरा-छोरीहरू भनेका ती नै हुन् जो परमेश्वरकै आत्माद्वारा डोर्याइएका हुन्छन्।
15 जुन आत्मा तिमीले पाएकाछौ त्यो तिमीलाई फेरि दास बनाउने र डर देखाउने आत्मा होइन। हामीले पाएको आत्माले हामीलाई परमेश्वरका छोरा-छोरी बनाउँछ अनि त्यही आत्मासँगै हामी भन्छौ, पिता, प्रिय पिता।
16 अनि त्यो आत्मा आफैले हाम्रो आत्मालाई साक्षी दिन्छ कि हामी परमेश्वरका सन्तानहरू हौं।
17 यदी हामी परमेश्वरका सन्ताहरू हौं भने हामीले आशीर्वाद पाउनेछौं जुन परमेश्वरसित आफ्ना मानिहरूका लागि छ। हामीले ती आशीर्वाद परमेश्वरबाट ख्रीष्टसितै पाउनेछौं। तर हामीले ख्रीष्टले जस्तै दुःख-पीडा सहनु पर्छ त्यसपछि मात्र हामीले पनि ख्रीष्टले जस्तै गौरव प्राप्त गर्नेछौ।
आत्मासँग अनन्त संसाधन छन् जसको साथमा मानवजातिलाई आशिष् दिन को लागी, र खुशी अधिक सजीलै प्राप्त हुनेछ र हाम्रो रखरखाव मा अधिक सुरक्षित हुनेछ, यदि आत्मा मा खोजिएको छ।
हुनुको विज्ञानले मानिसलाई सिद्ध प्रकट गर्दछ, भले नै पिता सिद्ध हुनुहुन्छ, किनकि आध्यात्मिक मानिसको आत्मा, वा मन भगवान हो, सबै अस्तित्वको ईश्वरीय सिद्धान्त हो, र किनकि यो वास्तविक मानिस भावनाको सट्टा आत्मा द्वारा शासित छ, आत्मा को कानून द्वारा, पदार्थ को तथाकथित कानून द्वारा छैन।
पदार्थ र चिकित्सा विज्ञान को तथाकथित कानून कहिल्यै नश्वर पूरा, सामंजस्यपूर्ण, र अमर बनाएको छ। आत्मा द्वारा शासित हुँदा मानिस सामंजस्यपूर्ण हुन्छ। अतः अस्तित्व को सत्य लाई बुझ्न को महत्व, जो आध्यात्मिक अस्तित्व को नियमहरु लाई प्रकट गर्दछ।
मानव सोचाईले परिकल्पना को माध्यम बाट आत्मा शब्द को अर्थ मिसाएको छ कि आत्मा दुबै खराब र एक राम्रो बुद्धि हो, पदार्थ मा निवासी। शब्द आत्मा को उचित उपयोग सधैं भगवान शब्द, जहाँ अर्थ आवश्यक छ प्रतिस्थापन गरेर प्राप्त गर्न सकिन्छ। अन्य अवस्थामा, शब्द भावना को उपयोग गर्नुहोस्, र तपाइँ वैज्ञानिक संकेत हुनेछ। ईसाई विज्ञान मा प्रयोग गरीएको छ, आत्मा ठीक आत्मा, वा भगवान को पर्यायवाची हो; तर विज्ञान बाहिर, आत्मा भावना संग समान छ, भौतिक अनुभूति संग।
जान्दछन् कि आत्मा र यसको गुणहरु सदाको लागी मानिस को माध्यम बाट प्रकट भएको थियो, गुरुले बिरामीलाई निको पार्नुभयो, अन्धाहरुलाई दृष्टि दिनुभयो, बहिराहरुलाई सुन्नु, लंगडाहरुलाई खुट्टा, यसैले मानव दिमाग र शरीर मा दिव्य दिमाग को वैज्ञानिक कार्य लाई प्रकाशमा ल्याउन। र आत्मा र मुक्ति को एक राम्रो समझ दिँदै। येशू एक र एउटै आध्यात्मिक प्रक्रिया द्वारा रोग र पाप निको पार्नुभयो।
आत्मा पदार्थ हो, जीवन, र मानिस को बुद्धि, जो व्यक्तिगत छ, तर कुरा मा छैन।
आत्मा कहिल्यै आत्मा भन्दा कम केहि प्रतिबिम्बित गर्न सक्दैन।
मानिस आत्मा को अभिव्यक्ति हो। भारतीयहरु अन्तर्निहित वास्तविकता को केहि झलक पकड, जब उनीहरु एक निश्चित सुन्दर ताल "महान आत्मा को मुस्कान" भनिन्छ।
मानिसहरु को विपरीत र झूटा विचारहरु भगवान संग ख्रीष्ट को पुत्रत्व को आफ्नो भावना बाट लुकाए। तिनीहरूले उहाँको आध्यात्मिक अस्तित्व बुझ्न सकेनन्। उनीहरुको शारीरिक दिमाग यससँग दुश्मनीमा थियो। ख्रीष्ट येशू द्वारा प्रस्तुत गरीएको परमेश्वरको आध्यात्मिक विचारको सट्टामा उनीहरुको विचार नश्वर गल्तीले भरिएको थियो। भगवान को समानता हामी पाप को माध्यम बाट दृष्टि गुमाउँछौं, जो सत्य को आध्यात्मिक भावना को बादल; र हामी यो समानता तब मात्र महसुस गर्छौं जब हामी पापलाई वशमा पार्छौं र मानिसको विरासत प्रमाणित गर्दछौं, भगवानका छोराहरुको स्वतन्त्रता।
आत्मा मानिस को ईश्वरीय सिद्धान्त हो र पाप कहिल्यै, - यसैले आत्मा को अमरता। विज्ञान मा हामी जान्दछौं कि यो भौतिक भावना हो, आत्मा होइन, जुन पाप गर्दछ; र यो पाईन्छ कि यो पाप को भावना हो जुन हराएको छ, र एक पापी आत्मा हैन।
नश्वर मानिस आफैंलाई भौतिक पदार्थ जस्तो लाग्छ, जबकि मानिस "छवि" (विचार) हो। भ्रम, पाप, रोग, र मृत्यु भौतिक भावना को झूटो गवाही बाट उत्पन्न हुन्छ, जो, अनन्त आत्मा को फोकल दूरी बाहिर एक कथित दृष्टिकोण बाट, मन र पदार्थ को एक उल्टो छवि प्रस्तुत गरीएको छ सबै उल्टो भयो।
यो झुटो आत्मा भौतिक रूपहरु मा एक असन्तुष्ट निवासी हुन को लागी मानीन्छ, र मानिस आध्यात्मिक को सट्टा भौतिक हुन। अमरता मृत्यु द्वारा बाध्य छैन। आत्मा द्वारा कम्पास छैन। सिद्धान्त टुक्रा टुक्रा विचारहरुमा पाउन सकिदैन।
भावना को त्रुटिहरु लाई पूर्ववत गर्न को लागी एक पूर्ण र निष्पक्ष रूप मा अत्यन्तै टाढाको पैसा तिर्नु पर्छ, जब सम्म सबै त्रुटि अन्ततः सत्य को अधीनमा ल्याईन्छ। पाप को ज्याला तिर्ने ईश्वरीय विधि एक को झुक्न नसक्ने, र अनुभव बाट सिक्ने कसरी भावना र आत्मा को बीच विभाजित गर्न को लागी।
ईश्वरीय विज्ञानले पुरानो बोतलहरुमा नयाँ शराब, पदार्थ मा आत्मा, न त अनन्त को परिमित मा राख्दैन। हाम्रो आत्मा को तथ्यहरु लाई बुझ्ने बित्तिकै हाम्रो झूटा विचारहरु नष्ट हुन्छन। पुरानो विश्वास बाहिर फ्याँक्नु पर्छ वा नयाँ विचार बगाउनु पर्छ, र प्रेरणा, जो हाम्रो दृष्टिकोण परिवर्तन गर्न को लागी, हराउनेछ।
नश्वर दिमाग त्रुटि संग भाग्नु पर्छ, आफैंलाई उसको कर्महरु संग छोडनु पर्छ, र अमर पुरुषत्व, ख्रीष्ट आदर्श, देखा पर्नेछ। विश्वासले यसको सिमाना फराकिलो पार्नु पर्छ र पदार्थ को सट्टा आत्मा मा आराम गरेर यसको आधार बलियो बनाउनु पर्छ।
हामी झूटा जगहरुमा सुरक्षित रुपमा निर्माण गर्न सक्दैनौं। सत्यले नयाँ प्राणी बनाउँछ, जसमा पुराना कुराहरु बितेर जान्छन् र "सबै कुरा नयाँ बन्छन्।" जुनून, स्वार्थ, झूटा भूख, घृणा, डर, सबै कामुकता, आध्यात्मिकता को लागी उपज, र हुनु को प्रचुरता भगवान को पक्ष मा छ, राम्रो।
ईसाई धर्म को प्रकृति शान्तिपूर्ण र आशीर्वाद छ, तर राज्य मा प्रवेश गर्न को लागी, आशा को लंगर पदार्थ को पर्दा बाहिर शेकिना मा डालीनु पर्छ जसमा येशू हाम्रो अघि बितिसक्नुभयो; र यो मामिला भन्दा बाहिरको प्रगति धर्मीहरुको खुशी र विजय को साथ साथै उनीहरुको दु: ख र पीडाहरु को माध्यम बाट आउनु पर्छ। हाम्रो गुरु जस्तै, हामी भौतिक भावना बाट आध्यात्मिक हुनुको अस्तित्व को भावना बाट बिदा हुनु पर्छ।
भौतिक जीवन को विश्वास र सपना बाट बिल्कुल अलग, जीवन ईश्वरीय छ, आध्यात्मिक समझ र सारा पृथ्वी मा मानिस को प्रभुत्व को चेतना प्रकट। यो समझले त्रुटि बाहिर निकाल्छ र बिरामीलाई निको पार्छ, र यसको साथ तपाइँ "एक अधिकार भएको रूपमा" बोल्न सक्नुहुन्छ।